गैँडा अनुगमनमा नयाँ प्रविधि | We Nepali
गैँडा अनुगमनमा नयाँ प्रविधि
२०७२ माघ २५ गते ८:०८
रत्ननगर (चितवन), २५ माघ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा अनुगमनका लागि नेपालमै पहिलो र नयाँ प्रविधिको प्रयोग सुरु भएको छ ।
संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा नै पहिलोपटक चितवन निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रबाट उक्त प्रयोग सुरु भएको हो । वास्तविक समयमा गैँडा के गर्दै छ भनेर मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत हेर्न सकिने गरी सफ्टवेयर तयार पारिएको हो ।
यसअघि नेपाली सेनाले गस्तीका लागि मात्रै भनेर एउटा प्रविधि भित्र्याएको भए पनि गैँडाको अनुगमनमा केन्द्रित गरेर आएको एप्लिकेसनसहितको यो पहिलो प्रविधि हो । कोठामै बसेर गैँडा कहाँ गइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्न मिल्ने गरी मोबाइल एप्लिकेसन तयार भएको जनाइएको छ ।
जियोलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन, चितवन निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपाली सेनाको संयुक्त प्रयासमा मोबाइल एप्लिकेसन ल्याइएको हो । एन्ड्रोइड मोबाइलमा प्रयोग हुने यो एप्लिकेसन संवेदनशील र सुरक्षाका हिसाबले सर्वसाधारणका लागि भने खुला हुँदैन ।
नेपालमै पहिलोपटक मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत गैँडाको अनुगमन गर्न सकिने गरी नयाँ प्रविधिको विकास गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका प्रमुख डा चिरञ्जीवी पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसअघि गैँडा अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष कापीमा टिपेर ल्याई भोलिपल्ट विश्लेषण गर्ने काम गरिन्थ्यो भने यो प्रविधिले अनुगमनकर्ताले रेकर्ड सर्भरमार्फत पठाएपछि तत्कालै कोठामै बसेर विश्लेषण गर्न सकिनेछ ।
उनका अनुसार गैँडा अनुगमनमा गएका संरक्षणकर्मीले सर्भरमार्फत रेकर्ड पठाएपछि मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत गैँडाको अनुगमन गर्न सकिनेछ । यसले कुन गैँडा कहाँ गएको छ ?, के गर्दैछ ?, बस्ती पस्न लागेको छ कि छैन ? भन्ने कुरा कोठामै बसेर अनुगमन गर्न सकिनेछ । गैँडा अनुगमन र अनुसन्धानमा यो प्रविधिको प्रयोग गरिने पोखरेलले बताए ।
“मुख्यगरी गैँडाको गहिरो अनुगमनका लागि यो सफ्टवेयर फलदायी छ,” डा पोखरेलले भने । आइतबार मात्रै चितवनमा तेस्रो शून्य चोरी–सिकार वर्ष मनाइएको छ । आगामी दिनमा संरक्षणमा थप चुनौती थपिएका बेला एप्लिकेसनले ठूलो योगदान गर्ने चितवन निकुञ्जका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले बताए ।
सुरुमा अहिले चितवन निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने पाँचवटा पोस्टबाट अनुगमनको काम हुनेछ । गैँडाको घनत्व कम भएको क्षेत्रबाट अनुगमन थालिएको हो । “यसबाट रियल टाइम मनिटरिङ हुन्छ,” कोषका संरक्षण अधिकृत सन्तोष भट्टराईले भने – “गैँडाका गतिविधि र आनीबानीसमेत अनुगमन गर्न सकिन्छ ।”
उनका अनुसार जो कसैले पनि तस्बिर अथवा भिडियो खिचेर तोकिएको सर्भरमा हालेमा उक्त फोटो भिडियो÷मोबाइल एप्लिकेसनमा आउँछ । कार्यालय या कोठामै बसेर पनि गतिविधि हेर्न सकिन्छ । यसले गैँडाको उपस्थिति बताउने भएकाले चोरी–सिकारीको निगरानी गर्न सजिलो हुने र संरक्षणमा टेवा पुग्ने कोषका अर्का संरक्षण अधिकृत शशाङ्क पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपालमा संरक्षित क्षेत्रमा २००७ सालदेखि प्रविधिको प्रयोगको थालनी गरिएको थियो र अनुगमन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सुरु भएको थियो । यसले अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेपछि शुक्लाफाँटा हुँदै चितवनमा पनि सुरु भएको थियो । तर अहिलेको यो एप्लिकेसन भने पहिलो हो ।
यसअघि चितवनमा नेपाली सेनाले आफ्नो गस्ती टोलीका लागि प्रयोग गरिएको ‘रियल टाइम’ गस्ती फरक खालको प्रविधिको प्रयोग हो । यो प्रयोगले सेनाका गस्ती टोली कहाँ गइरहेको छ ? के गर्दैछ ? गस्तीमा गयो कि गएन ? भनेर थाहा पाउन सकिन्थ्यो ।
स्मार्ट गस्ती, पैदल गस्ती, हवाई गस्ती तथा सवारी गस्ती सञ्चालन गरेको निकुञ्जमा यो नयाँ प्रविधि ल्याइएको हो । अहिलेको गस्तीमा भने कुनै पनि कर्मचारी वा सैनिकले छल्न नसक्ने दावी चितवन निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको श्रीजङ्ग गणका गणपति सञ्जय देउजाले गरेका थिए ।
चितवन निकुञ्ज संरक्षित वन्यजन्तुको प्रमुख बासस्थान हो । यहाँ बाघ, गैँडा, हात्ती, गोही, भालुलगायतका जनावर छन् । विश्वमै सबैभन्दा बढी एकसिङ्गे गैँडा पाउनेमध्ये दोस्रो स्थानमा चितवन पर्छ । भारतको काजिरङ्गा पहिलो हो । चितवन निकुञ्जमा ६०५ गैँडाको बसोबास रहेको अनुमान छ ।